Hadii uu ku soo gaadhay dhaawac shakhsi ahaaneed la xiriir sharci yaqaanada Pipella (Pipella Law). | Pipella Law
Qoobta Pipella Law, waxaan fahansanahay in uu adkaan karo dhexgalka nidaamka sharcigu- hadii aanay Ingiriisigu luuqadada koowaad ahayn. Marka lagu daro Ingiriisiga, garyaqaanadu waxay diyaar ula yihiin macaamishooda adeeg turjubaan ee luqadaha af Somali, German iyo Punjabi.
Hadii shaqaalahayaga diyaarka ihi aanay dhammeystiri karin baahidada marka koowaad, Pipella Law waxay ku diyaarinaysa turjumaan adiga oo aan lacag dheeri ah bixin. Waxaan khibrad badan u leenahay la shaqanta qoysaska iyo shakhsiyaad ka u bahan adeega turjubaanka, hadii loo baahdo turjubaanka waa joogi karaa kulan kasta oo aad nala yeelato laga bilaabo la tashiga hore ilaa dhammaadka. Pipella Law wuxu kugu la shaqaynayaa luuqadaada.
Qoobta Pipella Law, waxaan aaminsanahay luqadu in aysan xujo ku noqon ilaalinta xuquuqdaada iyo helitaankaga cadaalad.
Hadii uu ku soo gaadhay dhaawac shaqsi ah la xidhiidh garyaqaanada dhaawacyada shaqsiga ah ee Pipella Law maanta si aad wax uga ogaato sida aad uga soo kaban lahad arrintan argagaxa leh.